[APK] Clash Royale အသစ်၏စပိန်နှင့်စသည်ဖြင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ Androidsis
[APK] Clash Royale ၏အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုစာသားအသစ်များနှင့်အတူဒေသခံများနှင့်စပိန်ဘာသာတို့ဖြင့်ကူးယူပါ
Manuel Ramirez | | APK, Royale ထိပ်တိုက်တွေ့, Android ဂိမ်းများ, လဲ tutorial
ငါတို့သည် APK ကို update လုပ်ချင်ရင် သင်၏ Clash Royale သည်သင်ဂိမ်းစတင်ချိန် မှစ၍ သင့်အား Google Play စတိုးသို့မွမ်းမံရန်ပို့ပေးလိမ့်မည်။ သင်ဤနည်းကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဤစာမူ၏အဆုံးကိုသင့်အားရည်ညွှန်းပါသည်။ သို့မှသာသင်သည်ကြီးစွာသော Supercell ဂိမ်း၏အသစ်ပြောင်းလဲမှုအသစ်၏သတင်းကိုပျော်မွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဗားရှင်း ၁.၀.၂၀ သည်မတ်လတွင်ကမ္ဘာအနှံ့ Clash Royale ဖြန့်ကျက်မှုမတိုင်မီအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောသတင်းဖြစ်သည်။ ဤအင်္ဂါရပ်အသစ်များအနက်မှဘာသာစကား ၁၄ ခုသို့ပြောင်းခြင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြသည် ကျနော်တို့နောက်ဆုံးတော့စပိန်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခြားအသစ်အဆန်းများမှာကဒ်အသစ်များ၊ နယ်ပယ်သစ်တစ်ခုနှင့်စစ်ကုန်းပတ်များစွာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အတူတူပင်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည့်အချိန်တွင်၎င်းတို့ကိုကဒ်ပြားအမြောက်အမြားကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ကဒ်အရေအတွက်သုံးခုရှိလိမ့်မည်။ ကဒ်ပြားများသို့မဟုတ်ကဒ်ပြားများစွာကိုစမ်းသပ်သည့်အခါသူတို့သည် ထပ်မံ၍ ပုံစံအသစ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာဖော်ပြနိုင်မည်။ ယခုအသစ်ပြောင်းခြင်း၏အထွက်များနှင့်အပြင်ကိုသိရှိပြီး APK နှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုကားအဘယ်နည်း။ ဤနောက်ဆုံးသတင်းကိုသင်နှစ်သက်နိုင်သည်။
1 ကဒ်အသစ်များ၊ နယ်ပယ်အသစ်နှင့်စစ်ကုန်းပတ်များစွာရှိသည်
2 အသစ်စာရင်းဘာလဲ Update
2.1 ကဒ်အသစ် ၆ ခု
2.2 နယူးနယ်ပယ်, ရင်ဘတ်နှင့်ပိုပြီး
2.4 Balance နှင့်အခြားအပြောင်းအလဲများ
တိုက်ပွဲဖြစ် Royale အခုတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်အများဆုံးကစားသည့် PvP အွန်လိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းများဖြစ်သည် မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များမှ။ ဤအမြန်သုံးမိနစ်ကြာဂိမ်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအပန်းဖြေအနားယူချိန်များနှင့်လာမည့်မတ်လတွင်ဤဗွီဒီယိုဂိမ်းကိုကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ကျက်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်အချိန်ကိုယူဆောင်လာစေသည်။
ယခုအသစ်ပြောင်းလဲမှုတွင်ကဒ်အသစ်များ၊ နယ်ပယ်အသစ်နှင့်သူတို့ဘာများနှင့်ပိုမိုနီးကပ်လာနိုင်မည်နည်း သုံးအရေအတွက်တိုးမြှင့်သောစစ်ကုန်းပတ်။ သို့သော်အကြီးမားဆုံးသောအသစ်အဆန်းမှာစပိန်၏တည်နေရာဖြစ်သည်၊ သို့မှသာသင်သည်ကဒ်တစ်ခုစီ၏အတွင်းနှင့်အပြင်ကိုပိုမိုသိရှိနိုင်ပြီးသင်၏ကုန်းပတ်ကို ပို၍ ကောင်းမွန်စွာဖော်ပြနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကဒ်အသစ် ၆ ခု
နယူးမော်ကွန်းကဒ်များ: အမှောင်မင်းသား, အဆိပ်
ကဒ်အမျိုးအစားအသစ် - ဒဏ္.ာရီ
အသစ်ကဒဏ္Cardsာရီကဒ်များ: မင်းသမီးနှင့် Ice Wizard ကို
ပြိုင်ဆိုင်ရာဒေသတည်ဆောက်သူအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (ဆုဖလား ၁၇၀၀ ရရှိသည့်အခါသော့ဖွင့်သည်၊ Royal Arena သည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်သို့ရွေ့သွားသည်)
ရင်ဘတ်: Giant Chest နှင့် Super Magic ရင်ဘတ်
လေ့ကျင့်ရေးကွင်းပြိုင်ဘက်များသည် ၃၅၀၀ ဆုဖလားများရရှိနိုင်သည်
တည်နေရာဘာသာစကား ၁၄ ခု (ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်၊ စပိန်၊ အီတလီ၊ ဒတ်ခ်ျ၊ နော်ဝေ၊ ပေါ်တူဂီ၊ ရုရှား၊ တူရကီ၊ ရိုးရာတရုတ်၊ ရိုးရှင်းသောတရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယားနှင့်အာရဗစ်)
ကဒ်ငွေလက်ကျန်ဖြေ - ကဒ်တွေအများကြီးပြန်ညှိထားတယ်၊ ဒီ link ကနေ
ပြန်ဖွင့်ထိန်းချုပ်မှု- မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် နှိပ်၍ ပြန်ဖွင့်ခြင်းထိန်းချုပ်မှုများကိုပြသရန်နှင့်ဝှက်ပါ
ပျက်စီးareaရိယာ- damageရိယာပျက်စီးမှုကိုကိုင်တွယ်သောတပ်များနှင့်အဆောက်အ ဦး များသည်တိုက်ခိုက်မှုကာတွန်းအတွင်းပစ်မှတ်သေဆုံးပါက၎င်းတို့၏တိုက်ခိုက်မှုကိုရပ်တန့်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
ကြည့်မှန်: ယခင်ကဒ်၏ကုန်ကျစရိတ်မှန်ကန်စွာဖြေရှင်းနိုင်သည် +1 elixir
အားလုံးအသစ်အဆန်းများထဲတွင်, သင်တ ဦး တည်းလုပ်ဖို့ရှိသည် ၎င်းကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်ပြီးသားဖြစ်ကြောင်းအထူးဖော်ပြသည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဂိမ်းစတင်သောအခါ၊ ချိန်ညှိချက်များမှသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဘာသာစကားဖြင့်ပြုလုပ်ရန်၎င်းကိုပြင်ဆင်နိုင်သည်။
အခြားအသစ်အဆန်းများသည်ကဒ်ပြားအသစ်များနှင့်အတူသွားသည် တပ်ရင်းအမျိုးမျိုး နှင့်ဒဏ္letterာရီ, အက္ခရာသစ်တစ်ခုကဘာလဲ။ နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေသေးသောမင်းသမီးနှင့် Ice Wizard ဖြစ်လာသည့်ဒဏ္cardsာရီကဒ် ၂ ခုရှိသည်။ အများအပြားကစားသမားများကအလိုရှိသောလိမ့်မည်ဟုပံ့ပိုးမှုများကိုနှစ်ခု။
အခြားအရေးကြီးဆုံးအသစ်အဆန်းမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည် သုံးကုန်းပတ်အဆင်သင့်ရှိသည် ငါတို့လိုချင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာသူတို့ကိုသုံးဖို့ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ်မှုအမျိုးမျိုးနှင့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှိပ်ခြင်းဖြင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုပြောင်းလဲရန်လွယ်ကူသည်။
အချို့အတွက်လက်ရှိဇယားမှပြုပြင်မွမ်းမံတွင် ပိုပြီးမျှတတဲ့ဂိမ်းများကို မီးမောင်းထိုးပြသည့်အချက်များအရ Giant Skeleton ၏ထိခိုက်သည့်အချက်များနှင့်လွန်ခဲ့သောစက္ကန့်မှသုံးစက္ကန့်အထိဗုံးတိုးလာခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ ဗုံး၏နှောင့်နှေးသောအချိန်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုဖယ်ရှားရန်ထွက်သွားကြသောစစ်တပ်များသည်ယခုအခါမိမိကိုယ်ကိုသတ်သေမှုဖြစ်သဖြင့်ပေါက်ကွဲမှုအချင်းဝက်မှထွက်ခွာရန်အချိန်ရှိသည်။
အဲဒီမှာလည်းရှိပါတယ် တက်စလာ၏ hit အချက်များလျှော့ချနှင့်အတူဆက်လက် ဂိမ်းချိန်ခွင်လျှာအတွက် update ကို ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအပါအ ၀ င်၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်တပ်တွေကိုအာရုံလွှဲရန်မလွယ်ကူပါ။
သင်ယခုမှရရှိနိုင်သောအသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ် နှစ်ခု shared လင့်များ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာသင်သည်ဗားရှင်းအသစ်ကိုကူးယူရန်ခွင့်ပြုသည်။ မင်းမှာတိုက်ခိုက်ရေးလမ်းညွှန်လည်းရှိတယ် ဒီ link ကနေ.
Clash Royale ၏ APK ဗားရှင်း 1.0.20 ကို download လုပ်ပါ/ နောက်ထပ်ကြေးမုံ / ဒုတိယကြေးမုံ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » APK » [APK] Clash Royale ၏အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုစာသားအသစ်များနှင့်အတူဒေသခံများနှင့်စပိန်ဘာသာတို့ဖြင့်ကူးယူပါ
85 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ကောင်းပြီ၊ မနေ့က apk ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုက်ပြီး update က hahaha ထွက်လာတယ်
ဒါကိုကူးယူလို့မရဘူး၊ ဘာလုပ်ရမလဲ။ : c
clash royal သို့ပြန်သွားရန်
Mauritius ပန်းများ ဟုသူကပြောသည်
Mauricio Flores ကိုပြန်ကြားပါ
RUBÉN GOMEZ သို့ပြန်သွားပါ
ဟုတ်ကဲ့! အချိန်ကောင်းပဲ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြန့်ချိမှုအတွက်များစွာကျန်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အဲဒါကိုကျွန်တော် download လုပ်လို့မရဘူး။ မှန်ကကျွန်တော့်ကို play store မှအကြီးကြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်ပေးတယ်
link နှစ်ခုလုံးက active ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စမတ်ဖုန်းမှချက်ချင်းပင်ကြိုးစားပြီး၊ ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်သည်၊ သင်သည်သင်၏မိုဘိုင်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လား။
အခြားဝဘ်ဆိုက်တင်ပို့သူတစ် ဦး အားကြိုးစားကြည့်ပါ။ ငါ APK ကို download လုပ်ရန် Chrome ကိုသုံးပါ
Rodrigo ခမောက် ဟုသူကပြောသည်
Rodrigo casco အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ ဖွင့်ပြီးသောအခါကျွန်ုပ်သည်ထည့်သွင်းရန်ရွေးစရာကိုရရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ပေးသောအခါ၎င်းသည်ဘာမှမလုပ်ပါ။ ခလုတ်မရှိခဲ့ပါကဘာလုပ်ရမည်နည်း။
Ice Wizard နှင့်မင်းသမီးသည်ဒဏ္legာရီကဒ်များဖြစ်သည်
areco အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပါတယ်၊ mediafire ကနေတစ်ဆင့်မအောင်မြင်တဲ့ download ကိုဖော်ပြတယ်။ မှန်ကနေနောက်တစ်ခုဆီကိုပို့လိုက်တယ်။
အစုလိုက်အပြုံလိုက် areco မှ reply
ကျွန်ုပ်သည် entry ကိုအခြား download link ဖြင့် update လုပ်ထားသည် - ဒုတိယမှန်
သင် USB cable နှင့်ချိတ်ဆက်သည်၊ သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းသို့ကူးပြောင်းပြီးဖိုင် explorer အက်ပ်တစ်ခုကိုဖွင့်သည်။ ဖိုင်တွဲကိုရှာဖွေပြီးထိုအက်ပ်မှတပ်ဆင်ပါ။
အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်ကိုကျွန်ုပ် download လုပ်လို့မရပါ၊ ဘာလုပ်လို့ရလဲ။
ဒုတိယမှန်ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ငါကပဲ update လုပ်! မင်္ဂလာပါ။
စပိန်ဘာသာစကားပြောသူများစွာမှဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်လွယ်ကူစွာအချိန်ယူရသောဤစာမျက်နှာအတွက်ဂုဏ်ယူပါသည်။ ငါ ၃ ရက်ကစားပြီးပြီ၊ ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ယောနသန်၊ အခုပျော်မွေ့ကြပါစို့ ဂရိတ်ဂိမ်း: =)
နောက်တဖန် download လုပ်ပါ
Brayan Calatayut Camacho ဟုသူကပြောသည်
ငါ link နှစ်ခုမှဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားပြီး ... ငါ့ကိုမပေးပါဘူး ... သူကအထုပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အခါငါ့ကိုအမှားတစ်ခုပြောပြသည် ... ဒါကကောင်းကောင်းဒေါင်းလုပ်လုပ်ပေမယ့်မဖတ်ပါဘူး ... ငါ့ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်း us s3 mini ဖြစ်ပါတယ်။ .. သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည်ဂိမ်းကို uninstall လုပ်ရမည်။ 'v
Brayan Calatayud Camacho အားပြန်ပြောပါ
သငျသညျကို uninstall မပေးသင့်ပါတယ်, သင်သည်အဘယ်မှာရှိဖိုင်ကို update? ဘယ်ဖိုင် browser ကနေလဲ။ သင် uninstall လုပ်ပါက၎င်းကိုသင်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ အကယ်၍ သင့်တွင်အခြားစမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တစ်ခုရှိပါကသင်ပစ်လွှတ်လိုက်သောဂိမ်းများကိုမဆုံးရှုံးပါကနောင်တွင်သင်ပြစ်ဒဏ်များကိုချွေတာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မင်္ဂလာပါ။
ငါပီရူးမှဖြစ်ကြောင်း update ကို download လုပ်လို့မရပါဘူး။ Google play မှာ update မရရှိနိုင်ပါ။
ဒီမှာရှိတဲ့ download link သုံးခုထဲက APK ကို Download လုပ်ပါ။ မင်္ဂလာပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ဗားရှင်းအသစ်ကိုသင်မ download ချင်ပါ။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း။
ဒီဆောင်းပါးမှာ download link ၃ ခုရှိတယ်။
ငါ link ကိုမမြင်ရပါ !!
ဆောင်းပါးရဲ့အဆုံးမှာ download link သုံးခုထဲကတစ်ခု။ မင်္ဂလာပါ။
၎င်းသည်ဝိုင်ဖိုင်အလုံအလောက်မရှိကြောင်း၊ ၎င်းသည်အိုင်ကွန်သည်အနီရောင်ဖြင့်ပေါ်လာပြီးကျွန်ုပ်သည် router ဘေးတွင်ရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်ကိုမဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏အကောင့်နှင့်ထပ်ခါထပ်ခါ ချိတ်ဆက်၍ ၎င်းသည်မည်သည့်အရာကိုမဆို load လုပ်သည်မဟုတ်ပါ။ ချိတ်ဆက်ထားခဲ့ပါ
ဖုန်းကို Restart လုပ်ပါ APK ကိုထပ်မံ download လုပ်ပါ
ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပါပဲ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဂူဂဲလ်ကစားအကောင့်နှင့်ဆက်သွယ်ခွင့်မပြုပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အိုင်ကွန်ကိုအနီရောင်ဖြင့်ရပြီး၊ ကျွန်ုပ်ဆက်သွယ်မိသောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားဝိုင်ဖိုင်အိုင်ကွန်ကိုပေးသည်။
၎င်းသည် apk မှမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည် tablet တွင်ဆက်သွယ်မှုမရှိပါ၊ bluestacks နှင့်အတူ pc တွင် ... ၎င်းကိုကျွန်ုပ်မှ ၂- ကြိမ်ကူးယူခဲ့သည်။
မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်က၎င်းကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုသိလျှင်ဤမှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်ပါ။
ဂူဂဲလ်ကိုလည်းဆက်သွယ်ခွင့်မပြုပါ၊ ကျွန်ုပ်ဂိမ်းကိုရှုံးပြီးပါပြီ။ ငါအနီရောင်ဝိုင်ဖိုင်သင်္ကေတအနည်းငယ်ရပေမယ့်အခြားဂိမ်းတွေအားလုံးကိုငါ့ကိုခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် ... သူကဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာသိရင်ငါ့ကိုအသိပေးပါ။
ဗစ်တာ Almao ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ယခင် version ကို play store နှင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီဖြစ်သော်လည်းယခု၎င်းသည် Play store သို့ချိတ်ဆက်နေကြောင်းပြသသော်လည်းမည်သည့်အခါမျှဆက်သွယ်မှုမရှိပါ
ဗစ်တာ Almao အားစာပြန်ပါ
ငါဗင်နီဇွဲလားကပါ။ ဒီဂိမ်းကမထွက်လာသေးပါဘူး။ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းကို apk ကို download လုပ်ပါ။ နောက်ဆုံးသတင်းများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အမြဲတမ်းလိုလိမ့်မယ်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလွှတ်တင်မှုကိုမတ်လတွင်ဖြစ်သည်။ ဒေသဆိုင်ရာဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုမွမ်းမံရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ APK များမှတဆင့်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Google Play Store သို့သွားခြင်းကသင့်အား၎င်းကိုမွမ်းမံရန်ခွင့်မပြုပါ။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ Google Play မှာရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာမွမ်းမံနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ပျော်ပါ။ မင်္ဂလာပါ
ငါ link နှစ်ခုမှကူးယူပြီးပြီ .. သူတို့နှစ် ဦး စလုံးအထုပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အခါငါ့ကိုအမှားပြော။ ငါ့ဆဲလ် s3 ကိုဖြစ်ပါတယ် .. အဘယ်ကြောင့်ငါ့ကို update လုပ်မပေးသနည်း ..or ဂိမ်းကိုအရင်ဖျက်ရမည်။ 'v
အထုပ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသောအခါသင်ပြproblemsနာများရှိသည်, ထိုက၎င်း၏တစ်ခုလုံးကို download လုပ်ထားပြီးသေချာအောင်ထူးဆန်းပါသလား ၎င်းသည်အလေးချိန် ၈၇ megabytes ရှိမရှိစစ်ဆေးရန် file explorer ကိုရှာဖွေပါ။ မင်းကိုယ့်ကိုပြောပါ!
ကျွန်ုပ်ဒေါင်းလုတ်ဆွဲသောမေးခွန်းကိုကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကို ၅၀% ထည့်သောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကို ၀ င်ခွင့်မပြုပါကပျက်ကွက်သည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောပါသည်။
Diego galvis ဟုသူကပြောသည်
သူငယ်ချင်းသူငယ်ချင်း၊ မင်းကိုကူညီနိုင်အောင်သင်ကူညီနိုင်မယ်ဆိုတာသိရင်ကြည့်ရမယ့်ပြသနာတစ်ခုရှိတယ်၊ ကျွန်တော်တစ်ပတ်လောက်ကစားခဲ့ဖူးတယ်၊ ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မြှင့်ဖို့အတွက်ပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှပ်နှံခဲ့တယ်။ ကံမကောင်းတာကကိုလံဘီယာမှဖြစ်ပြီး၊ အက်ပလီကေးရှင်းစတိုးမှတစ်ဆင့်ဒေါင်းလုပ်ချခြင်း သင်၏ link မှတစ်ဆင့်ကူးယူနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်အမှားလုပ်မိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဂူဂဲလ်ကစားခြင်းသို့မဟုတ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဖြင့်ဂိမ်းကိုဘယ်သောအခါမျှမသိမ်းဆည်းနိုင်ပါ။ ၎င်းကိုမွမ်းမံသောအခါကျွန်ုပ်အဆင့်မြင့်သောအရာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်စိုးရိမ်သည်။
diego galvis အားပြန်ပြောပါ
မနက်ဖြန်သူတို့ကစားသမားအချို့ကြုံတွေ့ရသောပြtheနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မည့် APK အသစ်တစ်ခုကိုထုတ်လွှင့်လျှင်သင်စောင့်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်၎င်းကိုစတင်ရန်အချိန်များစွာကြာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်သည် Google Play မှအသစ်ပြောင်းခြင်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ မင်္ဂလာပါ။
update ကိုမတောင်းဆိုဘဲ Manuel ကိုဖွင့်ရန်နည်းလမ်းရှိပါသလား။ ကျွန်ုပ်သည် level6တွင် ရှိ၍ guevon မှကျွန်ုပ်သည်ဂိမ်းကိုမျက်နှာ (သို့) ဂူးဂဲလ်နှင့်မချိတ်ဆက်ပါ။ update ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်သောအခါကျွန်ုပ်ကြောက်သည်မှာ ငါကစားခဲ့ရာဖျက်ပစ်ပါလိမ့်မယ်
အဖြစ်ဝေးငါသိအဖြစ်မျှ Diego မှမရှိ။ မင်္ဂလာပါ။
ငါဂူးဂဲလ်နှင့်ဂိမ်းကိုချိတ်ဆက်ရန်မသွားနေပါတယ်အဖြစ် guevon အားဖြင့်ငါ့ကိုဖြစ်ပျက်
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားနေရာမလုံလောက်ကြောင်းပြသပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ s2 -_- တွင် 4gb နေရာရှိသည်။ ၎င်းသည်မှားသည်။
မင်းဒါကိုဖြေရှင်းခဲ့တာလား အကယ်၍ ဂိမ်းကိုသင်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်နှင့်ဆက်စပ်မိလျှင်သင်ကစားသည့်အရာကိုမဆုံးရှုံးစေရန် cache ကိုရှင်းနိုင်သည်
သူကကျွန်တော့်ကိုမပြုစုချင်ဘူး၊ ၄၈% ပဲဆက်ပြီးသူဟာငါ့ကိုဂိမ်းထဲကနေထုတ်ပေးတယ်၊
၎င်းသည် download ပြုလုပ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အကောင့်ကိုမျှဆက်သွယ်ခွင့်မပြုပါ
အပြာပြာပြာရောင်မှာတော့ ၅၀% အထိရောက်သွားတယ်။ အလိုအလျောက်ထွက်လာတယ်။ ငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားပြီးငြီးငွေ့ခဲ့ပြီးဒီဂိမ်းကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဟာ ၅၀% ထက်မပိုပါဘူး: /
၎င်းသည်သုံးစွဲသူများစွာရှိသည့် bug တစ်ခုဖြစ်သည်။ Supercell ဖိုရမ်များတွင်မှတ်ချက်ပေးသူများစွာရှိသည်။ ဖြေရှင်းနည်းမှာဆာဗာမှပြန်လည်ပြုပြင်ရန်သို့မဟုတ်အသစ်ထပ်မံမွမ်းမံရန်စောင့်ဆိုင်းရန်ဖြစ်သည်။ မကြာခင်မှာသူတို့မွမ်းမံမယ်ဆိုရင်ဆိုလိုတာကတော့ပစ်လွှတ်မှုဟာရက်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အချို့သောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများကဲ့သို့အမှားအယွင်းအချို့ကိုပြင်ဆင်ရန်ဒေသဆိုင်ရာပစ်လွှတ်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းသတိရပါ။
ကောင်းပါတယ်၊ မွမ်းမံမှုမတိုင်မီအဆင့် ၅ ရှိပြီးဂူဂဲလ်ကစားခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကောင်းပြီ၊ ငါမြင်တွေ့ရသည်။ ငါ update ကို download လုပ်၍ google play နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ပေးသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည် google play avatar ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီး Nick ကိုထည့်ရန်ပြောခဲ့သည်။ ဂူဂဲလ်ကစားခြင်းဂိမ်းအကောင့်သည်ကျွန်ုပ်၏ဂိမ်းအားလုံး၏တိုးတက်မှုအားလုံးနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်းဘာမျှမဖြစ်နိူင်ဟုထင်ခဲ့သည်။ သို့သော် C. Royale ရှိeconnect ခလုတ်ကိုနှိပ်တိုင်းအချိန်တိုင်းဆက်သွယ်မှုနိမ့်ပုံပေါ်လာခြင်းနှင့်ဘာမှမရှိဟု Alexete5 ကိုကြိုဆိုသည်။ ငါဂိမ်းကိုဘာမှမဖြစ်သကဲ့သို့အဖြစ်စတင်ခဲ့သည်နှင့် google play button ကိုနောက်တဖန်အနီရောင် ... ဆက်လက်ကူညီကျေးဇူးပြုပြီး, ငါ့ယခင်အကောင့်နှင့်အတူကစားရန်လိုအပ်သည်
ဗားရှင်းအသစ်ရှိလျှင် Play Store မှသင် Google Play ဂိမ်းများကို update လုပ်ပါသလား။ အနီရောင်ခလုတ်လား သင်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်ဖြင့်ဝင်ရောက်ရန်ကြိုးစားပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ပေးပြီးမှခလုတ်သည်ဘာမှမဟုတ်သကဲ့သို့အနီရောင်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်ဂူဂဲလ်အကောင့်နှင့်မည်သို့ဝင်မည်နည်း။ ဒါဟာငါထင်ပြောဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။
M Wood ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပါပဲ။ ကံမကောင်းတာကကျွန်ုပ်၏တိုးတက်မှုကိုဆုံးရှုံးသွားပုံနှင့်၎င်းသည်အဆင့် ၅ ဖြစ်သည်။ update လုပ်ထားသော apk ကို download လုပ်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်သည် google play account နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အခက်အခဲများရှိခဲ့လျှင်၎င်းကိုချိတ်ဆက်သောအခါသူကဆက်သွယ်မှုကဲ့သို့ပေါ်လာသည်။ ချိတ်ဆက်နေစဉ်တွင် wifi သင်္ကေတမှထွက်လာသည်။ သတိပြုမိလိုက်သည်နှင့်ဂူဂဲလ်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ခလုတ်သည်အနီရောင်ထွက်လာသည်။ ကျွန်ုပ်ကို၎င်းကို bluestack တွင်ထည့်သွင်းရန်ကြိုးစားသည်၊ ၎င်းသည်အတူတူပင်၊ ငါဘာမှမဖြစ်ဘူး၊ ငါတစ်ပတ်လောက်ငါဟဟားကစားခဲ့တယ်ဆိုတာရှုံးနိမ့်သွားတယ်။ လေးနက်တဲ့အချက်ကအကောင့်အသစ်ကဂူဂဲလ်မှာမဖွင့်ထားဘူး၊ ဒါကြောင့်ဒီအမှားကိုဖြေရှင်းဖို့သင်မသိသေးခင်မှာအကောင့်တစ်ခုနဲ့မကစားသင့်ဘူး။ ဆက်လက်ပျောက်ဆုံးနေသည် .. ဆက်လက်ရှင်သန်နေသည် .. မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်သူနှင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည် ..။
ကောင်းပြီ၊ စတင်ရန်အချိန်သိပ်မကြာပါ၊ ထို့ကြောင့်သူတို့ကအချို့သောအမှားများကိုဖြေရှင်းပါကသင့်အကောင့်ကိုပြန်လည်ရရှိလိမ့်မည်။ မင်္ဂလာပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဂူဂဲလ်ကစားခြင်းအကောင့်အဟောင်းနှင့် ဆက်သွယ်၍ မရပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် wifi အချက်ပြအနီရပြီး၎င်းသည်တူညီနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏အကောင့်အဟောင်းကိုမည်သို့ဆုံးရှုံးနိုင်သနည်း။ အသစ်ပြောင်းပြီးကတည်းကဒီလိုဖြစ်လာတယ်။
ငါအဖြေရှာတွေ့ပေမယ့်သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့တိုးတက်မှုအားလုံးဖျက်ပစ်လိမ့်မယ်၊ သူတို့အကောင့်ကိုကောင်းကောင်းပြန်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်၊ အဲဒါကဂိမ်းအသစ်နဲ့ဆက်စပ်နေလိမ့်မယ်။ မင်း
Android အတွက်သာအလုပ်မလုပ်သူများအတွက်ကောင်းသည် (ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ )
၁။ ဂူဂဲလ်ကစားဆိုင်၊ ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်စတိုးဆိုင်ဖွင့်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများမှ cache၊ ဒေတာနှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းများမှအသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုဖယ်ရှားပါ
ဖြစ်နိုင်လျှင်2ccleaner ဖြတ်သန်းရလိမ့်မည်
3 တိုက်ပွဲတော် Royal ဂိမ်းကို install လုပ်ပါ
ငါမွမ်းမံရန်သင့်ကိုတောင်းသောအရာကိုနောက်တဖန် install လုပ်ပါ
5 ကိုသင် load ချင်တယ်ဆိုရင်ပြောလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်သင်ကလက်ရှိတိုးတက်မှုကိုဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်
ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်မဖွင့်ခင် apk ကိုသုံးရင်သင့်အကောင့်ကိုပိတ်ပင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ရရှိနိုင်ပေမယ့်ဂူးဂဲလ်နှင့်ချိတ်ဆက်မှုမမှားခြင်းသည်တူညီနေဆဲဖြစ်သည်။ 🙁
တရားဝင် tb အကောင့်အမှားပေါ်လာသည်နှင့်အတူ
ကျွန်ုပ်ပြန်လည်စတင်သည်၊ ဖယ်ထုတ်ပြီး၊ အရာအားလုံးအတူတူပင်ဖြစ်သည်
Clash Royale ဖိုရမ်များတွင်အမှားအယွင်းကိုဖော်ပြထားသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်လျှောက်လွှာအသစ်ကိုထုတ်ပြန်ရန်စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကိစ္စဖြစ်လိမ့်မည်။ မင်္ဂလာပါ။
App များ ဟုသူကပြောသည်
Android clipboard ကနေဘယ်လိုများရနိုင်မလဲ
မည်သည့် terminal တွင်မဆို Android environment မျက်နှာပြင်ကို Root မပါပဲဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ